जागिरेको औसत तलब २० हजार मात्रै ! « Pen Nepal
जागिरेको औसत तलब २० हजार मात्रै !
Published On :7October, 2020 6:57 am By : पेननेपाल
काठमाडौं । नियमित तलब पाउने किसिमले देशैभर विभिन्न व्यावसायिक तथा अन्य सङ्घसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीको औसत मासिक तलब २० हजार रुपियाँको हाराहारी मात्र रहेको पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पहिलो पटक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले यस्तो देखाएको हो ।